Trafikana zava mahadomelina Rongony 14 gony tratra tao an-tranon'ilay ramatoa
Ramatoa 44 taona no voasambotry ny polisy ao Toliara ny alakamisy 23 aprily lasa teo noho ny fitazomana rongony.
Taorian'ny angom-baovao azo mahakasika ny fisiana vehivavy iray nitondra rongony dia nanokatra fanadihadiana ny polisy nanamarina sy nikaroka ity lehilahy ity. Fantatra tamin'izany fa monina ao amin'ny fokontany Motombe Tanambao Toliara I ity vehivavy ity. Nidina teny an-toerana ireo polisy ka tra-tehaka tao an-tranony miaraka amin'ny gony miisa 14 feno rongony milanja 420 kilao,izy. Nentina namonjy kaomisaria avy hatrany ity vehivavy ity miaraka amin'ireo rongony tratra. Taorian'ny fanadihadihana natao taminy dia natolotra ny fitsarana izy. Nodorana avokoa ireo rongony.